Thailandey mpisera Twitter miatrika fandrahonana noho ny fanehoankevitra momba ireo fiara mpanotrona ny mpanjaka · Global Voices teny Malagasy
Farafahakeliny olona 25 no migadra amin'ny lèse majesté amin'izao fotoana izao
Voadika ny 18 Oktobra 2019 8:08 GMT
Sary malaza navoakan'ny mpisera Twitter iray mampiseho fa ambulance iray no nasaina najanona tao Bangkok. Mampiseho ihany koa io fa nalaza sy nironana ny farangonteny iray amin'ny fiteny Thailandey midika hoe fiara sy môtô mpanotrona ny mpanjaka. Saripika avy amin'ny tranonkala Prachatai.
Ity lahatsoratra nasiam-panovana ity dia avy amin'ny tranonkalambaovao mahaleotena Prachatai avy ao Thailandy ary navoakan'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Asehony ao ny farangonteny malaza ahitana tsikera antserasera vitsy dia vitsy mitsikera ny fitondra-mpanjaka. Andro vitsy taty aoriana, nisambotra mpikatroka iray lazaina ho manompa ny fitondra-mpanjaka ny governemanta saingy nolazain'ny manampahefana fa tsy misy ifandraisany amin'ireo fiara manotrona manampahefana izany. Na izany aza, niteraka tahotra fa mety ho lasibatra koa ireo nampiasa ilay farangoteny ity fisamborana ity.
Tamin'ny 1 Oktobra 2019, nalaza tao amin'ny Twitter tao Thailandy ny farangoteny #ขบวนเสด็จ na fiara sy môtô mpanotrona ny mpanjaka noho ny fahamaroana tsy tambo isaina ireo sioka mitsikera ho valin'ny fandalovan'ireo fiara manondrona ny mpanjaka niteraka fitohanan'ny fiara manodidina ny Tsangambaton'ny Fandresena, Bangkok, ny takariva tao anatin'ny fotoana mahabe olona. Mitoetra ho tsy fantatra izay nentina tao anatin'ny fiara mpitondra mpanjaka. Nalaza ilay farangoteny na dia eo aza ny famerana araka ny lalàna amin'ny fitsikerana ny fianakavian'ny mpanjaka thailandey. Na izany aza, mpisera maro no nitatitra ho nahazo hafatra fandrahonana noho ny sioka nataony mitsikera.
Sioka iray nahazo retweets 36.6K, milaza fa voatery nanajanona ny anjombona fahamehana nalefany ny ambulance iray rehefa nandalo ireo fiara mpanotrona sy mpitondra mpanjaka. Sioka iray nahazo 46k retweets no nitatitre fa ambulances roa no nosakanana hijanona.
Nisy mpisera Twitter iray ihany koa namoaka sioka mitovitovy amin'izany ary nahazo 10.4k retweets, saingy tsy hita intsony ilay sioka sy ny kaonty miaraka aminy noho ny hazalambo. Nisy tsanganana iray nivoaka tamin'ny Facebook nilaza fa vaovao faikany ilay sioka sady mpandrisika. Navoakan'ilay tsanganana ihany koa ny sary izay lazaina fa an'ny tompon'ilay kaonty Twitter. Voafafa ilay tsanganana.
Nilaza ny Thai Lawyers for Human Rights [vondron'ny mpahay lalàna thailandey mpandala ny zon'olombelona] fa miatrika fandrahonana avy amin'ny mpandefa milaza ho avy amin'ny Lapan'ny Mpanjaka ny mpikatroka iray. Milaza ny hafatra hoe “Miangavy fafao daholo ny kaonty media sosialy rehetra anao amin'ity alina ity ho fiarovana anao.” Nilaza ity vondrona ity fa tsy manana fototra ara-dalàna ny fandrahonana ary tokony hanao famotorana ny ao amin'ny Lapam-panjakana satria nataon'ny mpisoloky ny hafatra.
Nifandray tamin'ny birao misahana ireo fonenan'ny mpanjaka ny mpanangom-baovaonay momba ity raharaha ity. Nilaza ilay olona namaly fa tsy miandraikitra izany raharaha izany ny Birao ka noho izany dia tsy afa-manome valiny, saingy heverina manokana fa tsy nivoaka avy amin'ny Lapa izany satria tsy mamaly na inona na inona amin'izany fomba izany velively ry zareo.
Nilaza ihany koa ireo mpisera Twitter fa tsy navela nandeha tany amin'ny garan'ny Tsangambaton'ny Fandresena ny mpandeha an-tongotra. Araka ny fomba Thailandey, tsy misy tongotra mahazo mihoatra ny lohan'ny fianakavian'ny mpanjaka.
Efa nisy taloha ihany ny farangoteny fiara mpitondra sy mpanotrona mpanjaka, fa tsy nalaza mandra-pahatonga ny alin'ny voalohany oktobra sy ny folakandron'ny ampitson'io rehefa nahatratra hatramin'ny 250k ny isan'ny sioka amin'io farangoteny io.
Nalaza ihany koa ny lahatsoratra amin'ny media sosialy miresaka ny vaovao iray nivoaka tamin'ny volana jona ahitana ny Amperora Japoney Naruhito izay nanajanona ny fiara mpitondra sy mpanotrona mpanjaka ho amin'ny sisindalana mba ahafahan'ny ambulance iray mandeha aloha.
Bangkok no faha-8 ratsy indrindra eto ambonin'ny tany eo amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana noho ny fananany taha 53% amin'ny fitohanana araka ny TomTom, mpanome tolotra lahatahiry iray avy any Holandy.
iLaw, fikambanana iray mahaleotena, no nitatitra fa araka ny lalànan'ny fifamoivoizana 2019, dia omen-dalana ny fiara niray mamonjy taitra hihoatra izay rehetra jiro mena sy hiantsona amin'ny faritra rehetra voarara. Tsy maintsy mijanona ny mpandeha an-tongotra ary mijanona an-tsisindalana. Tsy maintsy miato na mijanona amin'ny ankavia ny fiara hafa rehetra (anatin'izany ny biby) fa tsy mahazo mijanona amin'ny fihaonan-dalana [naoty: tanaty tara-pisainana britanika io firenena io ka anatin'izany ny fifamoivoizana].
Fa raha mifanaraka amin'ny famaritana araka ny lalàna amin'ny hoe fiara laharam-pahamehana miaraka amin'ny fiara mpamonjy voina sy hain-trano sy ireo fiara hafa nomen'ny polisin'ny Mpanjaka Thailandey alalana hitondra anjombona ny ambulance (fiara mitondra marary), dia tsy mazava kosa hoe manana izany sata izany ve ny fiara mpitondra sy mpanotrona mpanjaka, na hoe ry zareo ve no laharam-pahamehana raha tafaray lalana amin'ireo fiara mpamonjy voina izy ireny.
Tamin'ny taona 2010, nanangana komity hamaritra arofenitra ho an'ny fiara mpitondra sy mpanotrona mpanjaka ny Sekretera Manokana voalohany tamin'ny mpanjaka farany Bhumibol mba ho kely dia kely indrindra ny fanelingelenana ataony amin'ny vahoaka. Izany hevitra izany moa dia niorina tamin'ny ahiahin'ny Mpanjaka farany nolazainy tamin'ny taona 2001.
Tafiditra tao amin'ny arofenitra ny tsy fanerena hijanona amin'ny lalana ifanenana sy avy amin'ny zotra mifanila aminy. Afa-mandeha amin'ny lalana anatiny ihany koa ny mpandeha an-tongotra rehefa tsy misy ny fanahiana ara-pilaminana. Notaterin'ny BBC amin'ny teny Thailandey ny nolazain'ny kaomiseran'ny tobin'ny polisy ao Phayathai fa mbola manaraka hatrany ny arofenitra ny polisy.
Mety ho tratran'ny fitsarana araka ny andininy faha-112 amin'ny lalànan'ny heloka bevava izay manameloka ny fanalam-baraka, ompa na fandrahonana atao amin'ny Mpanjaka, ny Mpanjakavavy, ny Mpandova ny fanjakana, na ny mpiantoka ny mpanjaka mbola kely ireo mpitsikera ny fitohanan'ny fifamoivoizana nateraky ny fiara mpitondra sy mpanotrona ny mpanjaka ary mety higadra hatramin'ny 15 taona farafahabeny. 25 amin'izao fotoana izao farafahakeliny ny olona migadra noho ny lèse majesté. Miankina amin'izay hoe iza no tao anatin'ny fiara mpitaondra mpanjaka ny fisian'izany fitsarana izany.
Mety hihatra ihany koa ny Fizarana faha-14 amin'ny lalan-keloka bebava ao amin'ny solosaina, nampiharina bebe kokoa rehefa nandromba-pahefana ny miaramila tamin'ny taona 2014. Indray mampitondra hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina sy/na mandoa onitra 100,000 Baht (3200 Dollars amerikana) ho an'ireo rehetra mampiditra ao amin'ny rafitra lahatahirin'ny solosaina, toy ny sioka, izay heverina ho mety hampidi-doza ny fiarovam-pirenena.